सावधान ! बजारमा पाईने खाने तेलको प्रयोगले कतै तपाईं क्यान्सर मधुमेहको सिकार त हुनुभाछैन? - Jagaran Post
Home/स्वास्थ्य/सावधान ! बजारमा पाईने खाने तेलको प्रयोगले कतै तपाईं क्यान्सर मधुमेहको सिकार त हुनुभाछैन?
सावधान ! बजारमा पाईने खाने तेलको प्रयोगले कतै तपाईं क्यान्सर मधुमेहको सिकार त हुनुभाछैन?
२०७६ पुष २८, सोमबार १५:१७ गते
जागरणपोस्ट : शहर त छोडिदिऊँ, आजकल गाऊँमा समेत शुद्ध तेल प्रयोगमा आऊन छोडिसक्यो। यद्यपि गाऊँतिर अझैपनि तरकारीमा भुटन सके घ्यूकै गर्ने नसके आफ्नै बारीमा उत्पादन भएको तोरी पेलेर ल्याएको तेलको भुटन बनाऊने परिवारहरु धेरै होलान। तर, गाऊँघरतिर पनि आजकल पहिलाजस्तो दूध, दहि, मोहि घ्यू छ्यालफ्याल हुनैछाडिसक्यो भने आफ्नै खेतबारीमा उत्पादित तोरी पेलेर ल्याएको तेलको प्रयोग गर्ने परिवारको संख्या पनि निरन्तर घट्दै गएको छ। आन्तरिक एवं वाह्य वसाईंसराईं, वैदेशिक रोजगारी, शहरिया जीवन जिऊने रहरले गर्दा पहाडतिर अधिकांश खेतबारीहरु बाँझिएर गएका छन। पहाडमैं बस्नेहरुले पनि अधिकतम बजारमा उपलव्ध सामानको प्रयोग धेरै गर्न थालेका छन।
२२ जनाको परिवार हुँदापनि हामीहरुले जान्दासम्म बजारबाट तेल वेसाएर खाएनौं। चाडपर्व या यस्तै विवाह-वर्तवन्धलगायत ठूलो कार्य हुँदा भने बजारबाट नकिनी हुन्थेन, तर सामान्य परिवारको दैनिकिको लागि भने नुन, चिनी, चियापत्ति, साबुनलगायतका चिजहरुबाहेक बाँकी सवै घरमैं उत्पादित सामाग्रीको प्रयोग हुन्थ्यो।
हाम्रो हजुरबुवाको पालासम्म गोठमा लैना बकेर्ना भैंसी बाख्रा, गोरु कहिल्ल्यै टुटेनन भने तिनै खेतबारी हुन जसमा २२ जनाको परिवारलाई वर्षदिनसम्म पुग्ने अन्न उत्पादन हुन्थ्यो। आजभोली ती सवै बाँझिएर गएका छन। गोठ रित्तै भएर उराठ देखिन्छन।
हामी शहरिया भयौं। अब हामीले कुटो कोदालो गरेर खाने दिन गए। अब हामीले खाने भनेको घरबाट निस्केर दुकानसम्म गएर खनक्क नगद तिरेर नुन, तेल, घ्यू, चामल, पिठो, सागसब्जी, फलफूल, जुसलगायत हरेक चिजहरु नगदमा किनेर खाने वर्गमा उक्लियौं।
हामीले नगद तिरेर दैनिक अत्यावश्यक वस्तुहरु त बजारबाट किनेर ल्याऊछौं। तर, त्यसरि नगद तिरेर ल्याएका वस्तुहरु के गुणस्तरिय छन त? के त्यस्ता उपभोग्य वस्तु तथा सामानहरु शुद्ध छन त? के त्यस्ता सामानहरुमा कुनै मिलावट छैन त?
शतप्रतिशत केमिकलयुक्त मिलावट छ हरेक उपभोग्य वस्तु तथा समानहरुमा। हामीले भान्सामा बिहान साँझ या जतिखेर पनि तरकारी पकाऊनुपूर्व प्रयोगमा ल्याईने तेल कै कुरा गरौं। शुद्ध तोरीको तेल, शुद्ध सनफल्वावर तेल, तिलको तेल लगायत अनेकथरिका तेल बजारबाट त किन्छौं, तर ती तेलहरु कत्तिको शुद्ध र मिलावटरहित छन त भनेर कहिल्ल्यै चासो दिंदैनौं। हामीहरुलाई आकर्षक बिज्ञापन र आकर्षकै प्याकेट देखेपछि सवै राम्रो र गुणस्तरीय लागीहाल्छ।
हामीले भान्सामा प्राय: प्रयोग गर्ने तोरीको तेल होस या सनफ्लावर तेल होस, यी दुवैखाले तेलमा अत्याधिकमात्रामा राइसब्रान अर्थात धानको भुसको तेल मिलाईएको हुन्छ। यसका अलावा पाम तेल मिसाईएको हुन्छ। यसरि मिसाईएको तेलमा रंग, वासना र पिरोपना (सुँघ्दा खार आऊने भनिन्छ जसलाई) आऊने केमिकल, सिथेटिक एलाइल आइसोथायोसाइनेटजस्तो क्यान्सर उत्पन्न गराऊने खतरनाक केमिकल, प्याजको रस, फ्याटी एसिडलगायत अनेकन तत्वहरुको मिलावट गरि तेललाई आकर्षक र वासनादार बनाऊने गरिन्छ। जसले गर्दा तेल सुँघ्दा खारयुक्त र तीखो पिरो हुनेगर्दछ। तर हामी भने यसतर्फ कहिल्ल्यै सचेत हुन जानेनौं। हाम्रो यहिं लापरवाहिको कारण नै तेल उत्पादक कम्पनीहरुले खाने तेलमा अनेकन मिलावट गरि नाफा कुम्ल्याईरहेका छन हामी उपभोक्ता हरेक दिन क्यान्सरजस्तो खतरनाक रोगलाई आमन्त्रित गर्दैछौं।
मिलावटयुक्त तेल स्वास्थ्यको लागि अति हानीकारक हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि न हामी उपभोक्ता सचेत हुन सकेका छौं, न नै सरकारी अनुगमन चुस्त छ। केमिकल र ग्लिसरिन मिसाएर बनाएको तेलको प्रयोगले हाम्रो लिवरमा असर गर्नेगर्दछ भने एल्डिहाइट, पालिमर्सजस्ता खतरनाक तत्व मिसाएर बनाईएको तेल मुटुका धमनीहरुमा गएर जम्ने गर्दछ। जसको परिणामस्वरुप हृदयघातजस्तो गम्भिर अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।
बजारमा उपलव्ध विभिन्न प्रकारका खाने तेलहरुमध्ये मिसावट नभएको तेल लगभग पाऊनै मुश्किल होला। देख्दा राम्रो, आकर्षक र वासनादार तेल भनेर जसरि हामिले खरिद गरिन्छ त्यस्तो तेलसंगै हामीले क्यान्सर, मधुमेह, हृदयघातजस्ता खतरनाक रोगहरु पनि संगै किनिराखेका हुन्छौं। शुद्ध तेल पाऊन सायद अब बजारमा शून्यप्राय: नै होला।
हरेकबर्ष चाडवाडको बेलामात्र सरकारले बजार अनुगमन गरेको स्वाङ्ग पार्दछ। वास्तवमा बजार अनुगम हुँदै हुँदैन। भैहालेछ भने पनि पहिल्ल्यै झ्याली पिटेरमात्र अनुगमन गर्ने बानी परेको सरकरले उस्तै परे रकम बोलाबोलमा कुरा मिलाएर त्यस्ता केमिकलयुक्त खाद्यपदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनी, बिक्रेता सबैलाई हाईसन्चो तरिकाले उन्मुक्ति दिएको हुन्छ। तर, त्यसरि उन्मुक्ति दिने सरकारी अधिकारीहरुकै कारण आम उपभोक्ता त दिनहुँ ठगिन र लुटिन बाध्य छन भने उनीहरु स्वयं ठगिएको पनि मेसो पाऊँदारहेनछ कि कसो हो? कि त्यस्ता कर्मचारीको घरमा सिधै कम्पनीबाट शुद्ध खाने तेल पुर्याईएको हुँदोरहेछ कि कसो हो?
प्रस्तुति: बिजय ज्ञवाली
विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ करोड ५५ लाखभन्दा बढि
२०७७ श्रावण ११, आईतवार ०६:२३ गते
२०७६ भाद्र २४, मंगलवार १९:०९ गते
आवश्यक परे सेना र प्रहरी अस्पताल पनि प्रयोगमा ल्याऊने प्रदेश ५ सरकारको निर्णय
२०७७ बैशाख २४, बुधबार १४:३४ गते
२०७७ जेष्ठ १५, बिहीबार २१:३८ गते